RASMI: Laacibka ku guuleystay abaal-marinta xiddigii xilli ciyaareedka ugu fiicnaa kooxda Manchester City oo la shaaciyey – Gool FM
Haaruun May 21, 2019
(Manchester) 21 Maajo 2019. Waxaa la shaaciyey laacibka ku guuleystay abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkan dhammaaday ee 2018-19 kooxda kubadda cagta Manchester City ee dalka Ingiriiska.
Kubbad sameeyaha reer Portugal ee kooxda Man City, Bernardo Silva ayaa loo codeeyey inuu yahay ciyaaryahankii ugu fiicnaa garoonka Etihad xilli ciyaareedka 2018-19.
Silva waxa uu gacan ka geystay inuu kooxda Sky Blue ka caawiyo ku guuleysiga afar koob xilli ciyaareedkan, waxaana ay kala yihiin Premier League, FA Cup, League Cup iyo Community Shield.
Codeyntii ugu dambeeysay waxaa isugu soo haray saddexda ciyaaryahan ee kooxda Manchester City ka tirsan ee kala ah Bernardo Silva, Raheem Sterling iyo Sergio Aguero.
Inka badan 62,000 oo qof ayaa codeeyey, Bernardo ayaana ku guuleystay codeyntan kaddib markii uu helay 48%, isagoo ku garaacay abaal-marintan Aguero iyo Sterling.
Waxaa abaal-marintan shaaca ka looga qaaday boqolaal taageerayaasha Man City ah hortooda kaddib markii ay kooxdu koobabkii ay ku guuleystay xilli ciyaareedka ku soo wareejinaysay Magaalada Manchester.
“Waad ku mahadsan tahay qof walba,” Bernardo ayaa sidaas yiri. “Sida aad noosoo garab istaagteen xilli ciyaareedkan, waxa ay naga dhigtay inaan guuleysanno, adinka la’aantiin suurtagal ma noqon lahayn.”
“In badan mahadsanidiin, xilli ciyaareedka soo socda waxaan soo laaban doonnaa inagoo isku dayeyna inaan idin siino koobab badan.” ayuu hadalkiisa raaciyey Silva.
“Mbappé wuxuu si xoogan u doonayay inuu ku biiro Real Madrid” - Unai Emery